4 xiiso leh oo ku saabsan kuleylka adduunka | Saadaasha Shabakadda
El kululaynta aduunka ee hada Waa mid ka mid ah halista ugu weyn ee aadanaha ay la soo gudboonaatay kumanaan sano. Waa dhibaato, taas oo si kadis ah, aan uga sii darnay oo aan nafteenna ugu sii darraynno hawl-maalmeedkeenna caadiga ah, hadday tahay isticmaalka gaariga, xaalufinta ama wasakheynta.
Marka xigta waxaan kuu sheegayaa 4 xiiso leh oo ku saabsan kuleylka adduunka si aad si fiican u fahmi karto sida ay xaaladdu u daran tahay.
3 Ballaaraha harooyinka
4 Biyaha buniga ah
Kala bixiddu waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu halista badan ee kuleylka adduunka, mana ahan oo keliya maxaa yeelay dhammaan biyaha dhalaalaya waxay aadaan badda, taasoo keeneysa in heerkiisu sare u kaco, laakiin sidoo kale ka dhigaysa nolosha mid aad u adag xayawaanka ku nool nidaamyadan deegaanka, sida orso galka.
Iyo sida haddii aysan taasi ku filnayn, marka barafka dhalaalayo meydadka aan noolaha la soo bandhigin, taas oo, cudurada faafa ee la rumeysan yahay inay bakhtiyeen ayaa dib u soo muuqan kara.
Saddex iyo toban ka mid ah shan iyo tobanka magaalo ee adduunka ugu muhiimsan waxay ku yaalliin dhawr mitir (iyo xitaa sentimitir) heerka badda. Alexandria, California, New York, iyo kuwo kale, waxay leeyihiin a khatar aad u sareysa oo fatahaad ah, kaas oo noqon kara ilaa laba mitir sida ay sheegtay NOAA.
Ilaa hadda, 125 harooyinka Arctic ayaa la waayey iyada oo ah saamayn kulaylka adduunka. Waana in baraf-dillaacii iyaga ka hooseeyey uu dhalaalay, kaas oo, harooyinku dhulka ku qabsadeen. Xayawaanada ku nool biyahaan waxay qatar ugu jiraan inay dabar go’aan.
Biyaha buniga ah
Maaddaama heerkulka celceliska adduunka uu sii kordhayo, harooyinka ayaa bilaabi doona inay yeeshaan waxyaabo dabiici ah oo badan, sida badaha. Natiijo ahaan, dhirta ku nool moolka ayaa bilaabi doona inay baaba'aan la'aanta iftiinka qoraxda. Marka sidaas la samaynayo, xayawaannada cuna iyaga ayaa la qabsan doona oo la qabsan doona cunista waxyaabaha kale haddii ay doonayaan inay noolaadaan.
Cimilada sii kululaaneysa waa dhibaato ina wada saameysa. Haddii aan daryeelayno meeraha, cawaaqibyadeeda waxay u badan tahay inaysan ahayn kuwo aad u daran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » 4 xiiso leh oo ku saabsan kuleylka adduunka
Kumaa qoray tan? Isagu maahan khabiir saadaasha hawada, ma isagaa? Maaha cilmiga cilmiga cimilada, sax? Ma baran doono fiisikiska noloshiisa sidoo kale ma soo mari doono kuliyada cilmiga deegaanka. Layaab iguma ahan in qofkasta oo uusan u baahnayn inuu wax ka ogaado arintan uu leeyahay fikirka uu qabo. Cilmi-baarayaashu waa inay u sheegaan xaqiiqda sida ay tahay, iyadoon lagu qurxin waxyaabo aan weli la xaqiijin, sidoo kale, fekerkeyga, aan waligood la muujin karin. Kuwo badan ayaa sameeya sheekooyin naxdin leh, dabcan, oo xiisaynaya oo sidaas u ilaalinaya deeqaha ay bixiyaan, sida NGO-yo badan, oo 150 milyan ku qaatay sannadkii hore daraasado aan macquul ahayn. Laakiin gudaha Meteorologiaenlared? Maaha inay aadaan meesha aysan garanayn, ama ugu yaraan ay dhahaan yaa saxeexa maqaalka, waxa laga helayo ama ogaadaan inay tahay fikrad shaqsiyadeed, markaa waan ka tirtiri karnaa kuwa aan ugu jecel nahay.
Jawaab Juanjo Castro Ríos
Waad saxan tahay: ilaha way maqnaayeen. Kaliya iyaga ayaa saaray.
Waan ka xumahay inaysan dan kuu ahayn.
Dayaxu ma wuxuu kicinayaa dhulgariir waaweyn?